Taratry ny lasa: Raharimalala Léa | NewsMada
Taratry ny lasa: Raharimalala Léa
Ekipa nasionaly nahazo medaly volamena farany tamin’ny lalaon’ny Nosy
Raharimalala Léa, fantatry ny maro eo anivon’ny taranja volley ball. 61 taona izy, ankehitriny, kanefa mbola misehatra amin’ny taranja volley, hatramin’izao, izany hoe, 46 taona izao ny nidirany tamin’ity taranja ity. Ny taranja basikety sy volley ny nolalaoviny, fony izy mbola nianatra tao amin’ny Saint Joseph sy Sainte Famille. Ny volley anefa ny nanavanana azy kokoa amin’ny maha “Gauchière” azy, ao ihany koa, hoy izy, ny “ambiance” sy ny “cohésion” ao anatin’ny volley. Nanana ny naha izy azy i Léa tao amin’ny ekipa nasionaly tamin’izany fotoana izany. Tamin’ny fotoan’androny ny nahazoan’i Madagasikara ny medaly volamena farany, nandritra ny lalaon’ny Nosy notanterahina teto amintsika, ny taona 1990. Mbola nahazo laharana voalohany ihany koa anefa ny ekipa nasionaly nahitana an’i Léa, tamin’ny lalaon’ny Nosy 1985. Medaly volafotsy kosa ny azon’izy ireo, ny taona 1993 tany Seychelles.
Niatrika ny fifaninanana afrikanina farany nataon’i Madagasikara
Ny “Championnat d’Afrique des Nations”, ny fifaninanana afrikanina farany, natrehin’ny ekipa nasionaly malagasy, teo amin’ny Seniors vehivavy. Nanana vintana niatrika azy io ny ekipa nisy an’i Léa, ny taona 1989, ka nahazo ny medaly alimo. Vokatra azo lazaina fa tsara, raha ny taranja volley ball manokana no jerena. Isan’ny niara-nilalao taminy tamin’izany ry Ranaivoson Mamy, filoha lefitry ny FMVB amin’izao, ry Clarisse, filohan’ny federasiona teo aloha, Ralalavola Emma, i Olivia, i Vero, i Emilienne, i Holy, i Annah, i Yvonne sy ny maro hafa, izay efa nisy iray nodimandry.
Manana andraikitra maro amin’ny fitondrana ekipa
Ankoatra ny fitondrana avo ny voninahi-pirenena, mpanazatra ny ekipa nasionaly ihany koa Raharimalala Léa. Nanomboka ny taona 2007 izy no niditra tamin’ny fanazarana ireo mpilalao malagasy vehivavy ary mahazo tsara foana ny ekipa notarihiny, rehefa miatrika fifaninanana iraisam-pirenena toy ny lalaon’ny Nosy. Ny taona 2007, nahazo medaly alimo i Madagasikara,tamin’ny lalaon’ ny Nosy ary medaly volafotsy ny norombahina, ny taona 2019 tany Maorisy, nandritra ny andiany faha-10 ny JIOI. Efa mpikambana teo anivon’ny federasiona ihany koa i Léa, ny taona 2004-2008 ary filohan’ny ligin’Analamanga, nanomboka ny 2019 izy.
Efa nanao beach volley ary mbola manao basikety hatramin’izao
Tsy teo amin’ny volley ihany fa nanana ny lazany tamin’ny beach volley ihany koa ity filohan’ny ligin’Analamanga ny volley ity. Efa nisalotra ny tompondaka an’i Madagasikara, ny ekipa nisy azy, ny taona 2000. Ankoatra izay, taranja nankafiziny ny basikety ary mbola milalao amin’ny sokajy Vétéran i Léa, hatramin’izao, raha ny fitantarany. Marihina, nisafidy ireo taranja volley sy Basikety ireo ihany koa ireo zanany mianadahy ka manao volley ny vavy ary basikety kosa ny lahy.